Marary tao amin’ny hopitaly Namoy ny ainy vokatry ny delestazy
Nisy fahatapahana nandritry ny ora naharitra ny herinaratry ny jirama tamin'ny faritra misy ny Hopitalibe sy ny tobin'ny zandary ary tafika tao Toamasina ny zoma 10 janoary lasa teo.
Nisy raim-pianakaviana iray narary nasiana "oxygène" anefa tao an-toerana tao amin’ny “sampana medecine 123”, saingy namoy ny ainy, vokatry ny fahatapahan’ny herinaratra, izy io raha ny vaovao voaray. Asa na vokatry ny fahatapahan-jiro tokoa na antony hafa no nahafaty ilay olona. Tsiahivina fa nanomboka tamin’ny 08 ora maraina ka hatramin’ny 03 ora folakandro no tapaka ny herinaratra tao Toamasina tamin’io andro io. Amin’ny ankapobeny dia tsy tokony ho tapaka mihitsy ny jiro amin’ny faritra misy ny hopitaly, ary tokony hisy milina famokarana herinaratra fiandry eo anatrehan’ny mety ho fahatapahana eny amin’izy ireny. Tsy natao hanenjehana na hanomezan-tsiny na iza na iza. Tsy hisy hanao fanahy iniana na haniry izany fa tratry ny tsy azo hanoharana. Mety hiteraka fahatezerana anefa ny toe-javatra tahaka izao. Mila handraisana fepetra sy hitondrana vahaolana satria tsy misy mahavidy ain’olona, ary fahasalamana no tadiavina, kanefa zavatra hafa no miseho. Io mivoaka io ihany koa amin’izao ny resaka olana tsy fahampian’ny tahirin-dra ao amin’ny Hopitaly HJRA Ampefiloha, izay ilana fanentanana lehibe mba hivahan’ny olana. Ny ra izay alaina dia soloina, saingy misy ny olana.